Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si kulul u Cambaareeyey dilkii xalay loo geystay Xildhibaan Mustaf Xaaji Maxamad WARSAXAAFADEED. Soomaalinews.com 23 Sep 12, 09:09
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaliya Prof Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si kulul u cambaareeyey falkii xalay lagu dilay xildhibaan Mustaf Xaaji Maxamad oo kooxo hubeysan ku toogtay Degmada Waaberi.
Haddaba nuqul ka mid ah Warsaxaafadeedka oo soo gaaray Soomaalinews.com waxa uu u qornaa sidan Hoos ku qoran:
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sh. Maxamuud ayaa cambaareeyay dilkii xaq dar ada ahaa ee caawa loo geystay mid ka mid ah Xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed AUN Mudane Xaaji Mustafa Maxamed Cabdullahi oo ka mid ahaa xubnaha Barlamaanka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa hay�adaha amniga ku war galiyay in ay dardar-galiyaan sugida amniga, asagoo sidoo kalana hoosta ka xariiqay muhiimada amingu ku leeyahay qorshe siyaasadeedkiisa si looga hortago dilalka guracan ee markasta loo geesto shacabka iyo masuuliyiinta qaranka.